निजी मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट : सरकार किन मौन ? • nepalhealthnews.com
अतुल मिश्र, काठमाडौं || प्रकाशित मिति :2018-05-15 05:27:44
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको एमडी/एमएस (स्नातकोत्तर) तहमा भर्नाका लागि निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा अतिरिक्त १६ लाख रुपैयाँसम्म बढी असुल्न खोजेको भन्दै विद्यार्थी विरोधमा उत्रेका छन् ।
सरकारले हरेकपल्ट शुल्क तोक्ने तर निजी मेडिकल कलेजले थप शुल्क लिएर भर्ना लिने गरेको विद्यार्थीले बताए । उनीहरूले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समेत भेटेर सरकारले तोकेको शुल्कमा अटेर गरी थप लाखौं रुपैयाँ माग्ने निजी कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सरकारले क्लिनिकलतर्फ २२ लाख र बेसिकतर्फ १२ लाख ३ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । एमडी/एमएसमा सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त अधिकतम १६ लाखसम्म मेडिकल कलेजले मागेको विद्यार्थी बताउँछन् । ‘हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर सरकारी निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं,’ डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालकी महासचिव डा.तोशिमा कार्कीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजले यस्तो गर्न नहुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाउने बताउनुभएको छ ।’उनीहरूले सोमबार डिनको कार्यालयमा धर्नासमेत दिए । तर यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चालेको सरकार निजी मेडिकल कलेजहरूको सिन्डिकेटविरुद्घ भने मौन छ ।
काठमाडौं (कास)– चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन् । स्नातकोत्तर तहको अध्ययनमा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम मागिएको भन्दै विद्यार्थीले डिन कार्यालयमा धर्ना दिएको सन्दर्भमा डा. केसीले भने, ‘यो राज्यले गरेको निर्णयको अपहेलना हो । शून्य सहनशीलता मुखले भनेर हुँदैन, काममा देखाउनुपर्छ ।’ निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई लुट्न खोजेको केसीले बताए। ‘यो लुटतन्त्र र ब्ल्याकमेलिङलाई त्रिवि उपकुलपति, रेक्ट्रर र रजिस्ट्रारले मलजल गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यी तीनै जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिए पनि सरकार अझै किन चुप छ ? किन लुटतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ?’ एमडी/एमएस मात्र नभएर एमबीबीएसलगायत हरेक भर्नामा सरकारद्वारा निर्धारित भर्ना शुल्कको धज्जी उडाउने प्रयास निजी मेडिकल कलेजले गरेको पनि उनले बताए । ‘हालको अवस्थाले देशमा सरकार नै छैनजस्तो छनक दिन्छ,’ डा. केसीले भने, ‘राज्यको निर्णय किन कार्यान्वयन हुँदैन ?’ कान्तिपुर